Farmaajo: “Hay’adaha Qaramada Midoobey 90 Maalmood Ayey Haytsaan” • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Farmaajo: “Hay’adaha Qaramada Midoobey 90 Maalmood Ayey Haytsaan”
Raysalwasaaraha Dawladda Federaalka Kumkeelgaarka ah ee Soomaaliya ayaa shir saxaafadeed ku sheegay in hay’adaha Qaramada Midoobey ee arrimaha Soomaaliya ka shaqeeya ay 90 maalmood gudahood ugu soo guuraan magaalada Muqdisho.
Raysalwasaaraha ayaa sheegay in aysan danta Soomaaliyeed ku jirin in Hay’adaha Qaramada Midoobey ay ku sii sugnaadaan magaalada Nairobi, waxaana uu si gaar ah ugu casumey magaalada Muqdisho Ergayga Qaramada Midoobey Soomaaliya uga wakiilka ah Dr.Augustine P.Mahiga.
Farmaajo ayaa sidoo kale shirkiisa ku sheegay in Boqolaal Milyan oo Dollar ee loogu talo galay Soomaaliya aysan garanayn halka ay marto, ma jirto jidad la dhisey, mana jirto biyo safaysan oo dadka loo sameeyey.
“….Maalinkasta waxaan samaynaa horumar, waxaana loo baahan yahay in Qaramada Midoobey ay goobjoog ka tahay horumarka aan wadno, maaha in Telefon loogu sheego….” ayuu yiri Raysalwasaare Farmaajo, isaga oo hay’adaha Qaramada Midoobey ku dhiirigelinaaya in ay ka soo qaybgalaan Daawashada Dagaalada ka socda Muqdisho taas oo Dawladdu sheegtey in ay horumar ka gaartey.
Arintan ayaa noqotey mid banaanka soo dhigtey khilaafka balaaran ee u dhexeeya Dawladda kumeelgaarka ah iyo Qaramada Midoobey, kaas oo noqdey mid aan la qarin karin isla markaana isu beddelay dagaal toos ah oo la is xag-xaganaayo.
Dadka ka faalooda arrimaha Siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in Dawladda Federaalku ay hadda u shaqeyneyso qaab ku dhisan caadifad, iyada oo la mid ah wiil aabihiis dagaal ku qaadey, waxaaana ciyaartan horey u ciyaarey Xarakada al-Shabaab ee ka talisa qaybo badan oo kamid ah Koonfurta Soomaaliya, waxaana ay arrintan salka ku haysa in Shacabka Soomaaliyeed iyo Qaramada Midoobey la iska horkeeno isla markaana lagu guuleysto taageerada Shacabka. Si kastaba ha ahaatee Dawladda ayaa hadda ciyaareysa kaarkeedi u danbeeyey ee ay kula dagaalamayso Ergayga Qaramada Midoobey Augustine P. Mahiga.
Khilaafka u dhexeeya Hay’adaha Qaramada Midoobey iyo DFKGS ayaa salka ku haya waxa la yeelaayo xiliga kala guurka ah marka waqtigii sharciga ahaa ka dhamaado Dawladda bisha Agoost 2011.
Dawladda Federaalka ayaa ku dhisan taageerada Qaramada Midoobey, waxaana Qaramada Midoobey qabanqaabineysaa shir wadatashi ah oo dhacaya bishan April 12 – 13, kulankaas oo Dawladdu qaadacdey.